SAM ကို-ဗြိတိန် - ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံရထားခြံစည်းရိုး Install လုပ်နည်း
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » installation » ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံရထားခြံစည်းရိုး Install လုပ်နည်း
1. ခြံစည်းရိုး LAYOUT ကိုပွငျဆငျ
သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖို့နယ်နိမိတ်လိုင်းများ Locate ။
အိမ်ခြံမြေလိုင်းတလျှောက်တွင်မြေပြင်သို့လောင်းကြေးမောင်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီရှယ်ယာများအကြားတစ်ဦး string ကိုဆန့်။ အကြောင်းကို 24 "အိမ်ခြံမြေလိုင်း (Fig.1) ကျော်လွန် string ကိုချဲ့ထွင်ဖို့သေချာပါစေ။ ဒါဟာကွန်ကရစ်ပေါက်ရောက်ခြေချနိုင်မှုဟာ adjoining ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်သို့ထိပါးပါဘူးဒါကြောင့်အားလုံးရေးသားချက်များအိမ်ခြံမြေလိုင်း၏အတွင်းပိုင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်6"ကိုသတ်မှတ်ခံရကြောင်းအကြံပြုသည်။
မြို့တံခါးဝရေးသားချက်များ၏အနေအထားကိုအဆုံးအဖြတ်တဲ့အခါမှာ (ထောင့်, အဆုံးများနှင့်တံခါးဝပို့စ်များကို terminal ကိုရေးသားချက်များဟုခေါ်ကြသည်။ ) တစ်ဦးရှယ်ယာနှင့်အတူအသီးအသီး terminal ကိုပို့စ်၏တည်နေရာ Make, အမှန်တကယ်တံခါးဝဖွင့်လှစ်သီးသန့်လုံခြုံရေးဂိတ်အပိုင်းကိုကိုးကားပါ။
2. Terminator Post ခြင်း
post ကိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်အပေါက်ချင်းဒေသခံရာသီဥတုနှင့်မြေဆီလွှာအခြေအနေများကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း, terminal ကိုရေးသားချက်များနှင့်လိုင်းရေးသားချက်များအဘို့အပေါက်တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့် 10 "အချင်းနဲ့ 30" slope နှစ်ဖက် (Fig.2) နဲ့နက်ရှိုင်းတူးနေကြပါတယ်။ Post ကိုပေါက်တွေမိဖြစ်သင့်သည်။ 10 & quote; စံ4& quote ဘို့အချင်း; x က4& quote; ပို့စ်များကို 12 & quote;5& ​​quote ဘို့အချင်း; x က5& quote; ပို့စ်များကို။ တစ်မိဖို့ကွန်ကရစ်အတွက်ပို့စ်များကိုသတ်မှတ်မည်။ 22 & quote ၏အတိမ်အနက်ကို ;.
အားလုံး terminal ကို post ကိုတွင်းတူးကြ၏။
ကွန်ကရစ်အားလုံးကို Terminal Post ချမှတ်။
တွင်းထဲမှာ post ကိုနေရာချ။ အဆိုပါတိုင်တွင်း၌ဗဟိုပြုရပါမည်နှင့်သံလမ်းတိုင်သို့ဖြည့်စွက်ကြသောအခါထိုသူတို့ string ကိုလိုင်း Parallel ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခြံစည်းရိုးလိုင်းနှင့်အတူစတုရန်းဖြစ်ရပါမည်။ လက်သမားတစ်ဦးရဲ့အဆင့်နှစ်ခုကပ်လျက်နှစ်ဖက်ပေါ်တွင် post ကို Check ကြောင့်မှန်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်အဖြစ်လိုအပ်သောညှိ။ တန်းအထက်ခြံစည်းရိုးအမြင့်အဖြစ်ကောင်းစွာဤအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်သည်။
post ကိုလှည့်ပတ်ကွန်ကရစ်လောင်း; မြေပြင်အဆင့်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော2"မှဖြည့်ပါ။ ကွန်ကရစ်လုံးဝခြောက်သွေ့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ဖုန်နှင့်အတူအပေါက်၏ချိန်ခွင်လျှာဖြည့်ပါ။
3. တည်နေရာနဲ့ setting ကို LINE POST
terminal ကိုပို့စ်ပြီးနောက်ခြေတိုင်တည်ငြိမ်ဆက်လက်တည်ရှိရန်အဘို့အလုံလောက်အောင်ခိုင်မာရှယ်ယာနှင့်လိုင်းရေးသားချက်များ (Fig.3) ၏တပ်မက်လိုချင်သောအမြင့်အထိမ်းအမှတ်တိုင်၏ထိပ်ကိုဖြတ်ပြီး taut တစ်ဦး string ကိုလိုင်းဆန့်ကြပြီ။
အဆိုပါ string ကိုလိုင်းတလျှောက်အားလုံးလိုင်းရေးသားချက်များ၏အနေအထားကိုထွက်ရှယ်ယာအလုပ်လုပ်။
အားလုံးလိုင်း post ကိုတွင်းတူးကြ၏။
အပိုင်း2မှာဖော်ပြထားသကဲ့သို့, အဆင့် 1 နှင့်အဆင့်2"Terminator Post ခြင်း 'အားလုံးလိုင်းပို့စ်များကိုသတ်မှတ်မည်။
4. installation ရထားလမ်း
မှတ်စု: ခြံစည်းရိုးစနစ်၏ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့အပူချိန်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့်ပရိုဖိုင်းများ၏တိုးချဲ့မှုသို့မဟုတ်ကျုံ့ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သံလမ်းအကြား 1/2 ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေး "ချဲ့ထွင်ဘို့ခွင့်ပြုပါရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထစ်သို့မဟုတ်ကလစ်များနှင့်ဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမြို့ရိုးကိုအကြား 1/4 ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေး "ကျုံ့အဘို့အခွင့်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကလစ်ပ် Rails: ရေးသားချက်များသို့သံလမ်းထည့်ရှေ့တော်၌ထိုသံလမ်းနှစ်ခုလုံးကြီးစွန်းသို့ရထားလမ်းကလစ်များထည့်ပါ။ ချုံ့ခြင်းသံလမ်းလိုအပ်ပါသည်လျှင်, ရထားလမ်းကလစ်လက်ခံဖို့ဖြတ်ကြီးစွန်းမှာ 1/2 "အပေါက်တူး။
သံလမ်း: Insert အောက်ခြေရထားလမ်း, လက်ဝဲဘက်ပထမဦးဆုံးရှုံး post ကိုသို့အဖြစ်ဝေးသွားပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, ထို့နောက်အပြည့်အဝကလစ်ပါဝငျအခြား post ကိုသို့ရထားလမ်း၏လက်ျာဘက်၌လျှော။ အပိုင်းတခုစီမှာအားလုံးသံလမ်း installed မှီတိုင်အောင်, ဒီခြေလှမ်းထပ်, သင့်လမ်းကိုတက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
optional ဒီဇိုင်း: 2-ရထားဒီဇိုင်းကိုတပ်မက်လိုချင်သောအလျှင်, ပို့စ်များကိုခုတ်ဖြတ်။
5. GATE Post အားဖြည့်
ပတ္တာကို install လုပ်ပြီးကြိုတင်ကွန်ကရစ်လောင်းဖို့တံခါးကျင်။ ပတ္တာအားဖြည့်ခြင်းနှင့် #4သံဘောင်၏ 2-6 '' ကိုအပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူပို့စ်များကိုတံခါးကျင်။
လေထုအိတ်ကပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ရံဖန်ရံခါ tamping, ရေးသားချက်များသို့ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်း။
6. The post Caps attachment
တစ်ဦး-rated ခရမ်းလွန်နှင့်အတူတိုင်ပေါ်သို့ကော်ထုပ်, "ပူကော်" PVC ကော်ခွဲခြား။
7. ကို clean up
non-ပွန်းစားခြင်း (သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ပွန်းစားခြင်း) အပျော့စားဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆပ်ပြာနှင့်ပျော့ပျောင်းသောပလပ်စတစ်အပေါ်ယံအခွံကို pad ပါနှင့်အတူလိုအပ်သောအဖြစ်သန့်ရှင်းတဲ့ PVC ပစ္စည်း။ ဖုန်နှင့်ဆပ်ပြာဖယ်ရှားပစ်ရန်သန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေး။
ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းခြံစည်းရိုး၏ installation ကို မွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းခြံစည်းရိုးတပ်ဆင်ခညွှန်ကြားချက် ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုး၏ installation ကို ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးတပ်ဆင်ခညွှန်ကြားချက် ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးတပ်ဆင်ခြင်း